Iintsuku ezingama-30+ zokuRenta ziyafumaneka kuphela.
Le ndlu ye-shabby-chic ihlaziywe ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ukukubamba ngexesha lokuhlala kwakho kwilizwe eliphantsi laseCharleston, SC. Ngaphandle uya kufumana ipaki entle yobumelwane kunye nembonakalo entle yoMlambo iAshley. Kufuphi kuzo zonke izibonelelo zeCharleston.
“Ibanjelwe kwindawo enomtsalane iWageners Terrace kwaye ikufutshane kakhulu kuyo yonke into enokunikelwa nguCharleston!”
- Amy, umbuki zindwendwe wakho
I-Day bed, Ifeni esesilingini, I-Queen bed, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
4.97 (iingxelo zokuhlola 67)
Le ndlu ikwindawo yaseCharleston enefashoni yaseWagener's Terrace kumbindi wedolophu iCharleston. Kukumgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela ezininzi, iikhefi, iindawo ezithengisa utywala, kunye nezinye izinto ezinomtsalane kodwa zithe qelele kwindawo ephithizelayo, nengxolo. Indawo yokupaka yasimahla yesitalato iyafumaneka kwipropathi.
Umgama ukusuka eCharleston International Airport
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R11932
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Charleston